I-Pixelz: Kwi-Demand ye-Photo Retouching Service ye-E-Commerce | Martech Zone
I-Pixelz: Kwi-Demand ye-Photo Retouching Service ye-E-Commerce
Ukuba ukhe wavelisa okanye waphatha indawo ye-ecommerce, enye into ebaluleke kakhulu kodwa edla ixesha kukukwazi kwakho ukugcina iifoto zemveliso ezisecaleni ezincoma indawo. Oosomashishini abathathu baseDenmark abathe bakhathala kukungena kwingxaki efanayo yokudana emva kokuveliswa kwemveliso IPixelz, iqonga lenkonzo eliya kuthi hlela, uphinde uphinde ulungiselele imifanekiso yemveliso yakho, ukhulule uyilo lwakho uyile.
I-E-commerce yakhelwe kwimifanekiso-yeebhiliyoni zemifanekiso yemveliso icofa, iswayipha, kwaye ithelekiswa nabathengi mihla le. Ukuphumelela abo bathengi, iimveliso kunye nabathengisi kufuneka bavelise iifoto ezikumgangatho ophezulu, ngokukhawuleza, kunye nakwivolumu enkulu kakhulu kunangaphambili. Kulapho inkonzo yokuphinda ibuye kwakhona yePixelz ifika khona: umgca wokuhlangana kweNgcali yokuNcedisa ukuSebenza (SAW ™) umgca wokudibanisa ujika ukuhlela ifoto ibe yi-Software-as-a-Service.
Unesakhono sokulungisa ngokupheleleyo imveliso ekulindelweyo yokuqinisekisa ukuba yakhelwe iimfuno zakho ze-e-commerce.
IPixelz ikwaphuhlisile ezinye Amaphepha emhlophe afundisayo kwezona ndlela zibalaseleyo zokuboniswa kwemveliso ye-ecommerce. Iqonga labo libonelela ngeephakeji ezine ezahlukeneyo zamaxabiso:
Solo -Nikezela ngabafoti abazihambelayo ngokukwazi ukususa imvelaphi, isityalo, ukulungelelanisa, ukongeza izithunzi, kunye nokulungelelanisa imifanekiso yemveliso. Iphakheji iza nemifanekiso emi-3 yesilingo sasimahla kunye nokujika kweeyure ezingama-24 (Mon-Sat).
Pro umThengisi -Ubonelela ngeengcali ze-e-commerce ngayo yonke into eseSolo ngexabiso elisezantsi lomfanekiso, ukuthelekisa imibala kunye nokujika kusasa kusasa (Mon-Sat), kunye nokukhetha okukhawulezayo kweyure ezi-3.
Pro Studio -Ibonelela ngayo yonke into ekwiSolo ukongeza ekubambeni kwakhona ngokwesiko, ukuthelekisa umbala, ukubuyela umva, ukuhamba komsebenzi, kunye nokukhwela kwizitudiyo zeefoto zobungcali. Kubandakanya isivumelwano senqanaba leenkonzo, ukukhwela kubuchwephesha, ulawulo lweakhawunti olunikezelweyo kunye nabasebenzisi abaninzi.
API -Udityaniso lokuhamba komsebenzi kwisicelo sakho somntu wesithathu sabathengisi, indawo zentengiso, kunye nokusetyenziswa kweselfowuni ngeRESTful okanye SOAP API.
tags: Ukuchukumisa umfanekisoimifanekisoukuchukumisa ifotopixelzmvelisoimifanekiso yemvelisoiifoto zemveliso
Ngaba i-Enterprise IoT iza kuyinceda iJumpstart kwiRhwebo loRhwebo?
Jonga le imeyile i-Animated GIF ye-imeyile evela kwiNetflix